Hanaan Cusub oo lagula tacaalayo tahriibta iyo ka ganacsiga dadka – EUCAP Somalia
Tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka waa dembiyo dardaran, oo ay ka dhalan karaan cawaaqib xumo, ay ku jirto xita dhimasho. Dembiyada noocan ah, had iyo goor waa dembiyo caalami ah, waxayna guud ahaan gaadheen heer aad u sarreeya, taas oo keentey, mas’uulinta Soomaaliland in ay uga hortagaan qorista “ Sharciga ka hortagga Tahriibta iyo ka ganacsiga Muhaajiriinta”. Si loo taageero hawshan, Xafiiska Hay’adda EUCAP ayaa wuxuu fududeeyay aqoon-isweeydaarsi labo maalmood qaatay oo ka dhacay Hargeisa, kaas oo uu soo qabanqaabiyay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland.
“Dhammaantiin waxaad ka socotaan hay’adaha Muhiimka ah, waxaadna mas’uul ka tihiin ficillada ka dhanka ah tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka. Inta lagu guda jiro aqoon isweydaarsigan, waxaan ka wada hadli doonnaa isla markaana daraasad ku sameyn doonaa sharciga qabyada ah ee cusub ee looga hortagayo tahriibinta iyo ka ganacsiga qaxootiga. Intaa waxaa sii dheer, tani waa fursad lagu xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya hay’adaha sharciga ee kala duwan, iyo in la caddeeyo doorka aad ku leedihiin silsiladdan, ”ayuu yidhi Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Xasan M Aden markii uu furay aqoon-is-weydaarsiga 18-kii Agoosto.
“Waxaan la tacaalaynaa ganacsato, tahriibiyeyaal maalqabeeno ah. waxaan ganacsadaha noocan ah keenaa maxkamad waxaanan ku maxkamadayn karnaa caddeyn buuxda laakiin maalmo kadib, waxaan maqalnaa in la sii daayay, ka dib markii uu bixiyay ganaax, kadibna wuxuu sii wadanayaa ganacsigiisii sharci darrada ahaa. Waxaan u baahanahay waa inaan dib u dhaqan gelinno oo aan si adag u dhaqan galo Sharciga. Taas ayaa noo suuragelinaysa inaan ka hortagno dambiyada ama ugu yaraan aan yareynno tirada dambiyada, ”ayuu yidhi Xeer-ilaaliyaha Aw-Aadan.
“Waa tallaabo aad u wanaagsan oo horay loo qaaday in Xeer Ilaaliyaha Guud uu qabanqaabiyay aqoon isweydaarsigan, kaas oo lahaa qeybaha sharciga iyo dabaqid labadaba. Cusboonaysiinta sharciga qabyada ah ee cusub, dooda iyo laylisyada kooxeed ayaa ka qaybgalayaasha siiyay hanaan oo lagula dagaallamayo tahriibinta iyo ka ganacsiga tahriibayaasha ”, ayuu yiri La-Taliyaha Sharciga ee EUCAP Ib Kok Hansen.